Izisekelo ze-Twitter: Ungayisebenzisa kanjani i-Twitter (yabaqalayo) | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 4, i-2015 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Kuseseduze kakhulu ukubiza ukuphela kwe-Twitter, yize uqobo ngizizwa njengoba beqhubeka nokwenza izibuyekezo ezingathuthukisi noma eziqinisa ipulatifomu. Muva nje, basuse izibalo ezibonakalayo ezitholakala ngezinkinobho zabo zenhlalo kumasayithi. Angikwazi ukucabanga ukuthi kungani futhi kubonakala sengathi kungaba nomthelela omubi ekubandakanyeni konke lapho ubheka ithrafikhi ye-Twitter kumasayithi wokulinganisa abalulekile.
Ukukhononda okwanele… ake sibone izinto ezinhle! Ingcebo yedatha yesikhathi sangempela ku-Twitter ayinakuqhathaniswa online. Ngenkathi i-Facebook ingaba yingxoxo online, i-Twitter iyaqhubeka nokuba yinhliziyo ngombono wami. Izithombe ezinhle kakhulu ze-Facebook futhi zihlunga iningi lemininingwane, ngakho-ke ukusetshenziswa nokuzibandakanya kusontekile kakhulu. Akunjalo ku-Twitter.
Yini eyenza i-Twitter ihluke
I-Twitter ukusakazwa kwedatha okuqhubeka nokudlula. Uma ulandela ama-akhawunti amaningi, ukusakaza kushesha kakhulu. Kepha ayihlungiwe, ayihlosiwe, futhi ihlala ibonakala. Futhi ngokungafani nezinye izinkundla zokuxhumana, ama-akhawunti ofisa ukukhuluma nawo ayangeneka. Vele uphonse ifayili le- @nomfundo_m futhi ungangidonsa ungibhalele ngqo. Kukuphi okunye okungenzeka ku-inthanethi? Futhi uma ungathanda ukwenza ucwaningo oluthile, vele ufune igama usebenzisa i-hashtag, efana #marketing.
Bhalisela - bese uzama ukuthola isibambi esihle se-Twitter ngaphandle kwama-undersers kanye nenhlanganisela eyinkimbinkimbi. Akuzona zonke izibambo ezinkulu ezithathwayo; sihlala simangele ukuthi sisakwazi ukuthola izibambo ezinembile zamakhasimende ethu. Ngingancoma kakhulu ukuthi ngibe ne-akhawunti yomuntu siqu ne-akhawunti yenkampani kunokuba ngikubambe ngababili. Ngomkhiqizo, ukukhushulwa kulindelwe kancane kunama-akhawunti wakho lapho ungahle ucasule abantu abazama ukukulandela.
Setha iphrofayela yakho - akekho othembela noma olandela isithonjana seqanda, ngakho-ke qiniseka ukufaka isithombe sakho se-akhawunti yakho kanye nelogo yenkampani yakho. Thatha isikhathi sokwenza ngokwezifiso isikimu sakho sombala bese uthola isithombe sangemuva esihle esizobamba intshisekelo yabantu.
Gcina i-Bio yakho mfushane futhi amnandi! Ukuzama ukufaka ama-URL, ama-hashtag, amanye ama-akhawunti nezincazelo ezifushanisiwe akuphoqi kakhulu. Nayi ithiphu yami - yini ubuchwepheshe bakho futhi yini ekwenza uhluke? Bafake ku-bio yakho futhi abantu bazokuthola futhi bakulandele ngokuseshwa.
Landa izinhlelo zokusebenza ze-Twitter
Noma ngabe uku-desktop, i-smartphone noma ithebhulethi, kukhona owomdabu Isicelo se-Twitter ngikulindile! Uma ufuna ukuphuma konke, ungalanda futhi uqalise ngawo TweetDeck - ipulatifomu egcwele ububanzi enazo zonke izinsimbi namakhwela.
Tweets - I-Twitter ixoxe ngokwandisa ukubalwa kwezinhlamvu zama-tweets ngale kwezinhlamvu eziyi-140. Nginethemba lokuthi akunjalo, ubuciko obuningi nokuheha kwe-Twitter ukusetshenziswa okusheshayo kwe-tweet ehlelwe kahle. Kufana nokubhala i-haiku; kuthatha umkhuba nokucabanga okuthile. Kwenze kahle, futhi abantu bazokwabelana futhi balandele.
Sebenzisa ama-Hashtag - phinda kabili ukuzibandakanya kwakho ngokukhetha okungenani i-hashtag eyodwa, okubili kungcono. Uma ufuna ukwenza okuthile ucwaningo lwe-hashtag, Sibonise ithoni yamapulatifomu (iRiteTag ipholile impela!). Usebenzisa ama-hashtag asebenzayo uzokuthola utholakale njengabasebenzisi be-Twitter bacwaninga ipulatifomu.
Khulisa Ukufinyelela Kwakho Kwe-Twitter
Sesha abaholi bemboni yakho ku-Twitter, ubalandele, wabelane ngokuqukethwe kwabo, futhi uzibandakanye nabo lapho ungangeza inani engxoxweni.
Sesha amakhasimende akho ku-Twitter, ulandele, uwasize, uhlanganyele nawo, uphinde ubhale kabusha okuqukethwe kwabo ukuze wakhe ubudlelwano obungcono bokusebenza.
Ungabi yisinambuzane. Gwema amapulatifomu womyalezo oqondile ngokuzenzakalela, ukubhalela abantu ngokungadingekile, nokusebenzisa khulisa umlandeli wakho amacebo. Ziyacasula, futhi zifaka izinombolo zakho ngokungeyena ngaphandle kokukukhombisa ukuthi uqhuba kahle kangakanani.
Phromotha Lapho Uhlinzeka Ngevelu
Unomcimbi ozayo? Hlela amaTweets abala phansi emcimbini ngamathiphu okuthi abalandeli bakho bazozuza kanjani ngokuya khona.
Nikeza izaphulelo uma ukwazi, i-Twitter ithanda ikhodi yekhuphoni enhle noma isaphulelo.
Musa ukuthuthukisa nje, nikeza inani. Ukulalela izingqinamba zabalandeli nokunikeza ngamathiphu esidlangalaleni kuzokhokha kuzinzuzo
Khumbula ukuthi amaTweets andiza… uma unokuthile okuhle ongabelana ngakho, wabelane ngakho izikhathi ezimbalwa.
Hlanganisa i-WordPress ne-Twitter
Futhi uma ungathanda ukushicilela kabusha okuqukethwe kwakho ku-Twitter, i- I-plug yeJetpack ukukhangisa sici sikwenza kahle!
Khumbula, i-Twitter imarathon, hhayi i-sprint. Khulisa okulandelayo ngokomzimba nangokuhamba kwesikhathi uzobona izinzuzo. Ngokufana nokuhlanganisa inzalo, ngeke uthathe umhlalaphansi ngemuva kwama-tweets akho okuqala ambalwa. Lokhu infographic kusuka Salesforce inikeza ukuqonda okwengeziwe… Angiqiniseki ukuthi uzoba ngumpetha (uma kukhona into enjalo), kepha kuyiseluleko esihle.
Tags: khulisa abalandeli bakhoama-hashtagisetshenziswa kanjani i-twitterbuyisela emuvaTweetTweetdeckTwitterIzinhlelo zokusebenza ze-twitterizisekelo ze-twitterI-twitter infographicukufinyelela kwe-twitter
Dec 15, 2015 ku-5: 13 AM
Izinto ezinhle zabantu abafuna izinkundla zokuxhumana namathiphu we-SEO ayisisekelo… qhubeka nomsebenzi omuhle!